26-taona ny tanora indrindra lasa UK airline kapiteny
2 taona 5 volana lasa izay - 2 taona 5 volana lasa izay #271 by Colonelwing
Tsy maintsy manao izany NEWS nampiseho tamin'ny eto ho an'ny hoavy COMM mpanamory ny tomorow
ho toy ny Ohatra ny beleive ao amin'ny tena sy hanaraka ny nofy.
Kate McWilliams efa lasa ny UK 's tanora indrindra amin'ny 26 airline kapiteny. Nanomboka ny taona manidina ny 13 ary ankehitriny miasa ho an'ny Easyjet. Tatitra avy Sarah Duffy.
Maniry anao taona maro ao an-tia asa toy ny TOP Cpt ary ny sasany endrika fitsaboana fanadinana mandritra ny fiainana ny periode
ka hanohy manidina toy ny taona maro ho avy. Eny tokoa, MEDICAL dia tena manan-danja ho lasa nilaina COMM Pilot
ka tandremo tsara ny fahasalamana, raha tianao ny hanaraka ny lalana eo amin'ny fiainanao.
Gentelmen, no mbola mahatsiaro rehefa nahazo fanendrena ny Kapiteny voalohany ,,, ahoana no manadino andro izany eh!!
2 taona 5 volana lasa izay #287 by Gh0stRider203
izy no mahafatifaty ^ _ ^